शाखा कोअर्डिनेटर, हानपास कम्पनी लिमिटेड दोङदेमुन
अहिले कोरियामा हुण्डीको अवस्था कस्तो छ ?
एक वर्ष अगाडिसम्म हुण्डीलाई पेशा बनाएर कोरियामा बस्ने नेपालीको संख्या धेरै थियो । हुण्डी गैरकानुनी काम हुँदाहँुदै पनि खराब व्यक्तिले हुण्डीको बहानामा रकम उठाउने, बेपत्ता हुने र उठाएको रकम क्यासिनो र मदिरामा खर्च गर्ने गरेका घटना पनि सार्वजानिक भएका छन् । गत वर्षदेखि कोरिया सरकारले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई करोबार अनुमति दिएसँगै हुण्डी कारोबारमा करिब ८० प्रतिशत कमी आएको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको आगमनपूर्व करिब ९० प्रतिशत रकम हुण्डीबाट जाने र बाँकी १० प्रतिशत रकममात्र बैंकमार्फत् जाने गरेको थियो । अहिले यसको विपरित करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत रेमिट तथा बैंक च्यानलमार्फत् र बाँकी हुण्डीमार्फत् जाने गरेको अनुमान छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका रेमिट कम्पनीहरुबाट मासिक कति रकम नेपाल भित्रिन्छ ?
अहिले कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुलाई रिझाउन सफल रेमिट्यान्सहरुको दैनिक करोबार राम्रो छ । दैनिक ७०० भन्दा बढी रेमिट करोबार भएको रेकर्ड छ । इपिएसबाट आउने १ जना कामदारले १ महिनामा २ लाख रुपैयाँ नेपाल पठाउनुहुन्छ । कृषि पेशामा आउनेहरुको हकमा भने १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा रेमिट गर्ने गरेको देखिन्छ । कोरियाबाट करिब ४० हजार वैधानिक नेपाली कामदारहरुको मासिक तलब अहिले रेमिट्यान्सबाट नै नेपाल जान्छ ।
रेमिट्यान्सबाट पठाउँदा के फाइदा हुन्छ ?
कोरियाजस्तो कडा मेहनत गर्नुपर्ने ठाउँमा बसेर कमाएको रकम आफ्नो हातमा भएको मोबाइलमा केही क्लिक गरेर नेपाल पठाउन सक्ने सुविधा पाउने व्यवस्था रेमिट कम्पनीले गरेका छन् । नेपाल सरकारले भोलि कमाइको स्रोत खोजेको खण्डमा रेमिट्यान्सबाट रकम पठाएको प्रमाण उपलब्ध हुने हुँदा यसको कानुनी पाटो आफैंमा महत्वपूर्ण छ । रेमिट्यान्सबाट रकम पठाउँदा विश्वसनिय, सस्तो र सहज हुन्छ । रेमिट्यान्सका सबै सेवाहरु स्मार्टफोनबाटै लिन सकिन्छ । फेसबुक र भाइबर चलाउने सबैले रेमिट्यान्सको एप्लिकेसन चलाएर पैसा पठाउन सक्छन् । त्यसका साथै अहिले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्पर्धासँगै अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने क्रम पनि बढिरहेको छ ।
अझै पनि कोरियामा हुण्डी पूर्ण रुपमा विस्थापित हुन नसक्नुको कारण के हो ?
यसको प्रमुख कारण अवैधानिक कामदारको संख्या बढ्नु हो । कोरियामा विभिन्न बहनामा प्रवेश गर्ने र लुकेर काम गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । यसरी बस्नेहरुले नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारजनलाई कानुनी रुपमा रकम पठाउने बाटो बन्द हुन्छ, जसले गर्दा हुण्डीलाई मलजल पुगिरहेको हुन्छ । दोस्रो, कोरियामा पनि कतिपय विकट ठाउँहरु छन्, जहाँ रहेका कृषि फार्म तथा कम्पनीहरुमा रहेका नेपालीहरुको बैंकसँग पहुँच हुन गाह्रो हुन्छ । खासगरी गैरकानुनी रुपमा बस्ने कामदारहरुले नै हुण्डीलाई विकल्पको रुपमा लिएको हुनुपर्छ ।
नेपालमा हुण्डी नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायले के गर्नुपर्छ ?
सरकारले विदेश गएकाहरुले वैधानिक तरिकाले रकम नेपाल भित्र्याउन् भन्नका लागि प्रभावकारी नीति बनाउनेमात्र नभई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न सक्नुपर्छ । वैधानिक रेमिट्यान्सकर्तालाई नेपाल फर्केपछि उसले चाहेको व्यवसाय गर्नका लागि सहुलियत ऋण, व्यवसाय दर्ता शुल्कमा छुट, निःशुल्क अभिमुखिकरणा तालिम, प्राविधिक शिक्षामा पहुँच आदिको व्यवस्था गरेमा केही हदसम्म सकारात्मक प्रतिफल दिन्छ जस्तो लाग्छ ।